တပြည်သူမရွှေထား - YTV
Home » Daily Show » တပြည်သူမရွှေထား
Daily Show, Programs October 15, 2020 12:15 am
?‍♀️ လွမ်းရပြီပေါ့ “တပြည်သူမရွှေထား”ရေ ?‍♀️
? တခေတ်တခါကရုပ်ရှင်ကောင်းကောင်းတွေကို ပြန်ပြီးတော့ခံစားချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက် တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်ရဲ့ဝတ္ထုကို ရုပ်ရှင်အဖြစ်ထုံမွှန်းထားတဲ့ ဒါရိုက်တာစင်ရော်မောင်မောင်ရဲ့အနုပညာပုံဖော်မှုတွေနဲ့ “တပြည်သူမရွှေထား” ဆိုတဲ့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်…
? အဆင့်အတန်းကမတူ ၊ဓလေ့ကကွာခြားပေမယ့် သံယောဇဉ်ခိုင်မာလွန်းတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ရှေ့ဆက်ရမယ့် အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးလောကဓံမှာ ဘာတွေရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာကို အဓိကသရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီများရှင်မင်းသမီးကြီးမေသန်းနု နဲ့ မင်းသားကြီးကျော်သူတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသရုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့အတူခံစားကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်…
? မြန်မာရုပ်ရှင်ကြီးတွေကို ခံစားကြည့်ရှု့ချင်သူတွေအတွက် “တပြည်သူမရွှေထား”ရုပ်ရှင်ကားကြီးကို YTV Channel မှာကြည့်ရှု့ခံစားရင်း အချစ်ရဲ့အဖြေကိုရှာဖွေလိုက်ကြရအောင်နော်…
? ပြသမည့်ရက် : ၁၅-၁၀-၂၀၂၀ (ကြာသပတေး)
⏰ ပြသမည့်အချိန် : ည (၇) နာရီ (၁၀) မိနစ်
? ပြန်လည် ပြသမည့်ရက် : ၁၆-၁၀-၂၀၂၀ (သောကြာ)
⏰ ပြန်လည် ပြသမည့်အချိန် : မနက် (၉) နာရီ (၁၀) မိနစ်
?? YTV Channel ၏ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် အခြားသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာများကို အောက်ပါ Youtube Channel တွင် ဝင်ရောက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်နော်…